Lux iflethi kumbindi wesixeko iPodgorica, eBokeska 10 - I-Airbnb
Lux iflethi kumbindi wesixeko iPodgorica, eBokeska 10
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguVladimir
Eli gumbi lokulala linomtsalane kakhulu neliqaqambileyo (50m2) libekwe kanye embindini wePodgorica, kwisitrato esidumileyo saseBokeska esigcwele iindawo zokutyela, iivenkile kunye nayo yonke into oyifunayo. Ikufuphi nje neMontenegrin National Theatre.
Iflethi ixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye yahlaziywa ngokupheleleyo ngo-2014. Kukho ibhedi enye yesofa ephindwe kabini kwigumbi lokuhlala kunye nebhedi enkulu kwigumbi lokulala. Inomatshini wokuhlamba kunye nowomisa kwigumbi lokuhlambela kunye nomatshini wokuhlamba izitya ekhitshini. Iflethi ifanelekile kwi-3- 4 ppl.
4.74 · Izimvo eziyi-287
Iflethi iphakathi kakhulu kwaye ikwindawo ekhuselekileyo kwaye unayo yonke intuthuzelo ngaphakathi. Iindawo zokutyela, iibhaka, iibhari, iivenkile ezinkulu, iikhemesti, iibhanki zikwisitalato esinye. Phantse zonke iziganeko zenkcubeko zenzeka ebumelwaneni. Ithiyetha yeSizwe, iThala leeNcwadi leSizwe kunye neegalari ziphambi kwendlu. Ipaki enkulu kunye nomlambo omhle iMoraca yimizuzu emi-3 yokuhamba ukusuka kwindlu.
Ndiyafumaneka ukunika naluphi na uncedo kunye neengcebiso kwiindwendwe zam.
Ndingatsalela iteksi iindwendwe zam ukuya nokubuya kwisikhululo seenqwelomoya.